တရုတ် ဂိမ်း စက်ရုံသည် April ပြီ လတွင် ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၃ ၄၁ သန်း ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
တရုတ် ဂိမ်း စက်ရုံသည် April ပြီ လတွင် ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၃ ၄၁ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
May 27, 2022, 13:55ညနေ 2022/05/29 22:03:54 Pandaily
စီ အင္န္ ဂ်ီ ေဒ တာ ထုတ္ျပန္ တယ္ ”April ပြီလ ဂိမ်း စက်မှုလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ“ၿပီးခဲ့တဲ့ လက တ႐ုတ္ ဂိမ္း ေစ်းကြက္ ရဲ႕ ေရာင္း ရေငြ စုစုေပါင္း ယြမ္ ၂၂ ဒသမ ၉၉ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၁ ဘီလီယံ) ကို ျပသ ခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ပါတယ္။
April ပြီ လတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ PC ဂိမ်း ဈေးကွက် ၏ ရောင်းအား သည်ယွမ် ၄. ၉ ၃၉ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် တစ် လနှင့် တစ်လ တိုးတက်မှု ၏အဓိကအကြောင်းရင်း မှာ “League of Legends” ၊ “Cross-Firepower” နှင့် “Dungeon and Fighters” စသည့် ထိပ်တန်း ထုတ်ကုန်များ သည်အထူး လှုပ်ရှား မှုများအား တုန့်ပြန် သောအားဖြင့် သူတို့၏ လည်ပတ်မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် တိုးတက် မှုနှုန်းမှာ ၀. ၀၉% သာ ရှိပြီး စျေးကွက် အရွယ်အစား မှာ ယခင်နှစ် ထက်အနည်းငယ် ပိုမိုများပြားသည်။
တရုတ် မိုဘိုင်း ဂိမ်း ဈေးကွက် ၏ ရောင်းအား သည်ယွမ် ၁၆. ၉ ၅၉ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ယခင် လ ထက် ၂. ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ တိုးတက်မှု ၏အဓိကအကြောင်းရင်း မှာ ထုတ်ကုန် အသစ်များ ဖြန့်ချိ ခြင်းနှင့် Peace Games ကဲ့သို့သော လူသိများသော ဂိမ်း များအတွက် အားလပ်ရက် ပရိုမိုး ရှင်း များ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၅. ၂၉% ကျဆင်းမှု သည်အဓိကအားဖြင့် အလုပ် သစ် များ၏စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမွား အ ယြင္း အမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦး စာရင္းတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးအစား ခုနစ္ မ်ိဳး ရွိသည္။ ထို ကာလအတွင်း MMORPG/ARPG ဂိမ်း လည်ပတ် မှုသည် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူကာလ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် မပြောင်းလဲ ဘဲ ရှိနေသည်။ အလှည့်-based RPG ဂိမ်း လည်ပတ်မှု တိုး လာခြင်း သည်အဓိကအားဖြင့် “Fantasy Westward Journey” နှင့် “Query” ကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန် များ၏စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ April ပြီ လတွင် ဆိုင်းငံ့ ထားသော မိုဘိုင်း ဂိမ်း အရေအတွက်သည် ယခင် လ ထက် ၁၅၀% မှ ၈၀% အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ မိုဘိုင်း ဂိမ်း များကို နှစ်နှစ် မပြည့် မီ လည်ပတ် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:MiHoYo ဂိမ်း အသစ် “Honkai: Star Orbit” သည် ဒုတိယအကြိမ် ပိတ်ထားသော Beta စမ်းသပ်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
အိုင် ပီ သည် ဂိမ်း များ ၏အရေးကြီးသော ဂုဏ်သတ္တိ များဖြစ်ပြီး CNG ဒေတာ များ သည်ယခုနှစ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လက်ရာ များ မှဆင်းသက် လာသော ဂိမ်း များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ “Yu Qingnian” မိုဘိုင်း ဂိမ်း နှင့် “Swordman World 3” ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန် များသည် ပထမဆုံး လတွင် ယွမ် တစ် ဘီလီယံ လည်ပတ် ခဲ့သည်။ Yu Qingnian သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် multi-terminal စစ်ဆင်ရေး များမှတဆင့် အမြင့်ဆုံး လည်ပတ် ငွေကြေး နှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လက်ရာ များ မှဆင်းသက် လာသော ဂိမ်း အသစ်များ စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံး မှ ရှိသည်။
“Chinese Electricity Weekly”: Beijing Global Resort with Tencent နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး “The Hero League of the Field of the Field of the